पर्वतारोहण संघको नेतृत्व हत्याउन शेर्पाबीच नै होडबाजी | Citizen Post News
पर्वतारोहण संघको नेतृत्व हत्याउन शेर्पाबीच नै होडबाजी
२०७४ असार ९ गते २०:३०
काठमाडौं, ९ असार । पर्वतारोही व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए) को अध्यक्ष हत्याउन चलखेल सुरु भएको छ । करिब तीन दर्जन हिमालहरुबाट उठेको रोयल्टीबापत शुल्क एकलौटी लुट मच्चाउने अखडाका रुपमा पर्वतारोहरण संघ परिचित छ । जसका कारण संघको नेतृत्व लिन ट्रेकिङ व्यवसायीबीच होडबाजी हुने गर्छ । प्रायजसो: शेर्पाहरुको अधिनमा रहेको पर्वतारोहण संघमा आर्थिक लुट नै हुने गरेको छ । स्रोत भन्छ,‘संसदीय वा स्थानीय निर्वाचनमा पैसाको के खर्च हुन्छ र ? तर, संघको निर्वाचनमा पैसाको खोलो नै बग्ने गर्छ ।’ कारण–नेपाल पर्वतारोहरण संघको नेतृत्व हत्याउन सफल भएको खण्डमा त्यहिको सम्पर्कले व्यवसाय पनि चल्ने र संस्थामा बम्हलुट मच्चाउन सकिने सुविधा हो । जसका कारण निर्वाचन आउन एक महिना बाँकी हुँदै संघको नेतृत्व हत्याउने षड्यन्त्र सुरु भएको छ । महिना दिनअघि नै अध्यक्षका प्रत्यासी उम्मेद्वारहरुले आफ्नो प्रचार–प्रसारलाई व्यापक पारेपछि ‘खेल’ सुरु भइसकेको ट्रेकिङ व्यवसायीको बुझाई छ ।
कहिले हुँदै छ संघको निर्वाचन:
संघकाअनुसार संस्थाको साधारणसभा अगामी जुलाई २९ तारिख अर्थात साउन १४ गते हुँदै छ । आठौं साधारणसभाबाट अध्यक्षसहित २५ सदस्यीय नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचित हुने छ । अहिले संघमा व्यवसायी आङछिरिङ लामा अध्यक्ष रहेका छन् । यसअघि जिम्वाजाङबु शेर्पा अध्यक्ष थिए । यस संस्थालाई शेर्पा समुदायले दुहनो गाई बनाएको कतिपय ट्रेकिङ व्यवसायीले आरोप लगाउने गरेका छन् । निर्वतमान अध्यक्ष जिम्बाजाङबु शेर्पा, बर्तमान उपाध्यक्ष सन्तबीर लामा, भ्रष्टाचारमा पटक–पटक मुछिएका विवादित व्यवसायी भूमिलाल लामा, वर्तमान महासचिव ठाकुरराज पाण्डेलगायत अध्यक्षको प्रत्यासी बन्ने चर्चा चलेको छ । जिम्बाजाङबु शेर्पाको कार्यकालमा विवाद कम भएकाले उनको पनि बलियो संभावना छ । उनी स्वच्छ छवि भएका सालिन र भद्र व्यवसायीका रुपमा चिनिन्छन् । तर, पटक–पटक अध्यक्ष भइसकेका बर्तमान अध्यक्ष शेर्पा पनि सवैलाई मिलाएर आफै अध्यक्ष हुने दाउमा रहेको अन्य व्यवसायीको बुझाई छ । तर अध्यक्ष शेर्पाले संस्थाको प्रतिष्ठा पनि जोडिएकाले निष्पक्ष निर्वाचनबाट नयाँ अध्यक्ष छनौट हुने बताए ।
नेतृत्व हत्याउन किन हुन्छ होडबाजी:
विश्वभरका पर्वतारोहीहरुले नेपालको पर्वतारोहण सम्वन्धि सूचना यहि संस्थाबाट लिने गरेका छन् । सो क्रममा कुनै पनि पर्वतारोही व्यवसायीले विश्वभरका पर्वतारोहीसँग सम्वन्ध विस्तारगरी मनग्य काम हात पार्न सक्ने संभावना हुन्छ । त्यतिमात्र नभई सरकारले रोयल्टीबापत शुल्क उठाउने जिम्मेवारीसमेत दिएकाले नेतालाई प्रभाव पार्नेदेखि कोषको दुरुपयोग गर्ने छुट अध्यक्षलाई हुन्छ । जसका कारण संघको नेतृत्व हत्याउन ट्रेकिङ व्यवसायी मरिहत्ते गर्ने गरेका छन् । पर्वतारोहण सम्वन्धि जानकारी लिन चाहनेकाबीच संस्था विश्वभर चर्चित रहेकाले पनि त्यहाँ पुग्न होडबाजी हुने गरेको छ । त्यसो त, निर्वाचन निष्पक्ष गराउने भन्दा व्यवसाय बाँडफाँड हुने सर्तमा नोट र जाँड पार्टीका भरमा भोट लिने प्रचलन विगतदेखि नै संघमा चलिआएको छ ।
पर्वतारोहरण संघले के गरिरहेको छ ?
संघले पर्वतारोहण सम्बन्धि विभिन्न तालिम दिने, पर्वतारोही समस्यामा परेका बखत उद्धार गर्ने, ‘आइस क्लाइम्बिङ’, ‘स्की माउन्डेनरिङ’, ‘माउन्टेन रिडर कोर्स’, खेलकुदलगायतका प्रशिक्षण दिने काम गरिरहेको छ । एक दर्जन भन्दा बढि हिमालहरुको रोयल्टीबापत शुल्क उठाउने, ट्रेकिङ परमिट दिने अधिकार पाएको संघ हिमाल आरोहीबीच निकै चर्चित छ । हिमाली पर्यटनबारे जानकारी दिने, समन्वय गर्ने तथा पर्वतारोहण सम्बन्धि आवश्यक तालिम र उपकरण उपलब्ध गर्ने काम संघले गर्दै आएको छ